Emva komphumo ngumdlalo ongenakuphuthelwa kwi-iPhone yakho entsha | IPhone iindaba
UJuan Colilla | | IPhone imidlalo, Ukuzonwabisa
Ukuba ii-smartphones kunye neepilisi ziwela kuluhlu lwe induduzo yekamva Ukoyisa umhlaba wee-consoles eziphathwayo kuyinyani, kwaye oko kuyaziwa ngabo bobabini iApple kunye nabaphuhlisi, apho aba bathathe khona bathathe izigidi zeedola kwiAppStore enkosi kwimidlalo yabo yevidiyo, nokuba yeyimicropayments, intengiso okanye intlawulo enye.
Namhlanje sikulethela enye yemidlalo yevidiyo ephuma rhoqo ngexesha le-X, enye ebonakalayo phakathi kwabanye ngokungafaniyo, sithetha ngayo Emva kokuqhubela phambili, eyona fps ihambele phambili kwi-iOS ukuza kuthi ga ngoku.
Ukuba ufuna i-gamers kwaye unesixhobo se-iOS esilawulwa yi-64-bit chip, unethamsanqa, i-Afterpulse sisizukulwana esitsha simahla simahla esisekwe kwi Isinyithi se-API ukuba iApple ikhutshwe kunye ne-iOS 8 kwaye ikuvumela ukuba ufumane uninzi kwimizobo Iichips ezingama-64.
Inkqubo yokukhanyisa ephambili kunye nokuma okuphezulu, nantsi indlela Emva kwempembelelo ukumema ukuba ukhuphele umdlalo wevidiyo ngaphandle kweendleko eziya kukuvumela ukuba udlale apha ekhaya nakwi-intanethi ukuze uchithe iimbumbulu de ugqibe iintshaba zakho.
Enkosi kuwe Inkqubo yemivuzo yemihla ngemihla Singaqhubela phambili kumdlalo ngokuthenga umxholo oqhele ukubekelwa abasebenzisi ababhatala ngemali yokwenyani, le nkqubo yomvuzo inciphisa phantse i-0 umahluko phakathi kwabasebenzisi abahlawulayo kunye nabo bangalahli ingqekembe, kwaye konke oku ngaphandle kwentengiso okanye ukhuphelo lweendleko.
Ngokuqinisekileyo kuya kubakho iipakethe ezizodwa ngenkangeleko kunye nezixhobo ezigcinelwe abasebenzisi abahlawulayo, nangona kunjalo, ezi zinqabile kwaye azenzi mahluko ungaphaya kwembonakalo.
Sinokudibana nabahlobo bethu kwaye sithathe inxaxheba iimfazwe ezinkulu kwi-Intanethi kwiimephu eziphumelele kakhulu ezineziphumo ezinomtsalane kunye noburhabaxa obungenanto encinci okanye engenamona wokuthuthuzela imidlalo (ukugcina imigama esengqiqweni njengokugcwalisa iinkcukacha).
Ngaphandle kwamathandabuzo kubonakala ngathi ngumdlalo osekwe kwi-saga yasentsomini Ifowuni yomsebenzi yeekhonsoli, kwaye injalo imeko elungileyo, sinomdlalo ofana kakhulu neCall of Duty enembonakalo entle kwaye eya kuhlala isikhapha epokothweni simahla kunye nobunzima 500MB, Impumelelo enkulu kubaphuhlisi (lumka, kukho uhlaziyo), ngaphandle kwamathandabuzo ngala manani kubalulekile ukuba uzame.
ISAZISO: Iyahambelana kuphela nezixhobo ezinokwakha i-64-bit (i-A7 chip okanye ngaphezulu).
Kwaye wena, Ngaba ukhe wayizama? Ukuba kunjalo, ungathandabuzi ukushiya uluvo lwakho kwizimvo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iapps zokusebenza » IPhone imidlalo » Emva komphumo ngumdlalo ongenakuphulukana nawo kwi-iPhone yakho entsha
Molo, ndiyidlalile kwiveki ephelileyo kwaye kubonakala kulungile kakhulu kum, iye icothe kakhulu xa unxibelelana neseva, ngamanye amaxesha ivaliwe yodwa, kubonakala kum ngathi ayisiyonyani xa kudutyulwa ... khange ndigqibe icandelo loqeqesho kodwa ndishiyekile ndizibuza ukuba ingadlalwa na kusenziwa uthumo njengakumlo wangoku 5…. Ngaba umntu angandiphendula?
Kuyamangalisa, nangona kuyinyani ukuba kuthatha ixesha ukunxibelelana neseva, ayikaze indivale ndedwa, njengombuzo wakho, kukho imo yoqeqesho kunye nemowudi ye-intanethi kuphela, ingaphezulu kwe-fps ekwi-intanethi kune umdlalo ngemowudi yebali (kuba ayinako oku).
Sisiphi isixhobo kunye nohlobo lwe-iOS olusebenzisayo?
I-iPhone 6, i-iOS 9.1 ... ngaphezulu, ndiyicimile kuba khange ibonakale intle njengoko ibijongeka kwinqwelwana ... "uluvo lomntu" ndiza kuthatha iMC5
BEST MC5 OKANYE NOVA 3, Nangona kungekho namnye kubo ndingadlala kwi-intanethi kunye nabahlobo bam nangona imidlalo ingqinelaniswe ne-facebook kunye ne-gameloft 🙁
IGameloft ayisebenzisi iiseva ezinqamlezileyo okanye enye, ngenxa yesi sizathu awuyi kuba nakho ukudlala nayiphi na imidlalo ye-Intanethi kunye nomsebenzisi onenye inkqubo yokusebenza (njenge-Android).
Ndine-iPhone 6 ene-iOS 9.1. Kwaye inyani ngumdlalo endicebisa ukuba imizobo yenziwe kakuhle, ewe, kuyinyani ukuba ngamanye amaxesha iseva itshixa kancinci kodwa akukho nto imbi. Kudala ndiyidlala iveki ((by the way, I'm good good)) kwaye ngezo ntsuku ndidlala. Amaxesha ama-2 kuphela endibhuqwa kwiserver. inyani kufanelekile ukuzama!
Kuyamangalisa ukuba ayihambelani ne-iPhone 5… Ngaba sele siphumile kuhlaziyo?
Molo, ungandixelela ukuba ihamba nge-4s?
Ngumdlalo olunge kakhulu, ubaleka ngokukhawuleza okukhulu kum, ndine-iPhone 6S ene-IOS 9.3.5 (13g36). Ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lwezikhalazo, imizobo ilunge kakhulu, ayikhe yaphazamiseka, ayikaze ishiye iserver, bendiyidlala phantse inyanga ilandelelana kwaye ndigqibelele. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ndilungile Hahaha